कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ मस्तिष्कघातको जोखिम ? बच्न के गर्ने ? - NepalKhoj
कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ मस्तिष्कघातको जोखिम ? बच्न के गर्ने ?
नेपालखोज २०७६ पुष ६ गते ७:१७
टाउकोमा चोट लाग्दा, रगतसम्बन्धी औषधिको लापारवाही तथा उच्च रक्तचाप, मुटुको समस्या तथा कोलेस्ट्रोल, मधुमेहजस्ता समस्याका कारण पनि मस्तिष्कघात हुनसक्छ । धूमपान तथा अत्यधिक मदिरा सेवन मस्तिष्कघातका कारक हुन् । हाम्रो शरिरको केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष भएकाले मस्तिष्कमा समस्या हुँदा ज्यानै जान सक्छ ।
1. धूमपान, मदिरासेवनलगायत नशालु पदार्थको सेवन नगर्ने
2. नियमित व्यायाम गर्ने
3. शरीरको तौललाई सन्तुलनमा राख्ने
4. तनाव, चिन्ता नलिने
5. बढी मसलायुक्त खाना नखाने